Teboka vavaka hanoherana ny faminaniana ratsy. TOKO VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Teboka vavaka hanoherana ny faminaniana ratsy
Teboka vavaka hanoherana ny faminaniana ratsy
Androany isika dia hiatrika teboka vavaka mifanohitra amin'ny faminaniana ratsy. Efa nandre faminaniana ratsy momba ny fiainanao ve ianao? Nisy nanome anao ratsy ve? fanambarana ary nahatonga anao natahotra be izany ka tsy hitanao akory izay hatao? Ary ahoana ny amin'ny teny ratsy? Ary iza no nanameloka anao hatramin'ny fahafatesana? Nisy nanamafy taminao ve fa tsy afaka manana zavatra manan-danja amin'ny fiainana ianao ?.
Ny marina dia tsy maninona izay lazain'ny olona momba anao. Izay nolazain'ny olona taminao Andriamanitra dia nilaza tamin'izy ireo momba anao fa tsy tokony hamaritra anao. Tsy tokony hosaronanao tahotra fotsiny ny tavanao satria nomena faminaniana ny amin'ny fahafatesana ianao. Izany no fotoana tsara indrindra hikatsahana ny tavan'Andriamanitra amin'ny alàlan'ny vavaka. Tsarovy ny tantaran'i Hezekia mpanjaka ao amin'ny bokin'ny 2 Mpanjaka 20 Tamin'izany andro izany dia narary efa ho faty i Hezekia. Ary Isaia mpaminany, zanak'i Amoza, nankeo aminy ka nanao hoe: Izao no lazain'i Jehovah: Alamino ny tranonao; fa ho faty ianao; tsy ho sitrana ianao. ” Ary nitodika nankany amin'ny rindrina izy, dia nivavaka tamin'i Jehovah hoe: Jehovah ô, tsarovy ny nandehanako teo anatrehanao tamim-pahamendrehana tamin'ny foko rehetra sy ny nanaovako izay sitrakao. Ary nitomany mafy dia mafy izy. Talohan'ny nialan'i Isaia teo amin'ny kianja afovoany, dia tonga taminy ny tenin'i Jehovah nanao hoe: Miverena, ka lazao amin'i Hezekia, mpanapaka ny oloko, hoe: Izao no lazain'i Jehovah, Andriamanitr'i Davida rainao: Efa reko ny vavaka ary nahita ny ranomasonao; Hositraniko ianao. Ary amin'ny andro fahatelo, dia miakara ao amin'ny tempolin'i Jehovah ianao. Hanampy dimy ambin'ny folo taona amin'ny fiainanao aho. Ary hanafaka anao sy ity tanàna ity amin'ny tànan'ny mpanjakan'i Asyria aho. Hiaro ity tanàna ity aho noho ny amin'i Davida mpanompoko.
Indraindray ny faminaniana ratsy dia fitsapana ny finoantsika ary ny hafanam-pontsika eo amin'ny sehatry ny fivavahana. Afaka nanaiky ny hoaviny fotsiny i Hezekia ary niomana ho amin'ny fahafatesany. Na izany aza, takany fa tsy misy zavatra hitranga raha tsy hoe Andriamanitra no nandidy azy. Ary fantany fa mahay manova ny onjan'ny zavatra Andriamanitra amin'ny fotoana fohy. Nivavaka tamin'Andriamanitra avy hatrany izy ary novan'Andriamanitra ny faminaniana. Na ny Mpaminany Isaia aza dia tsy nivoaka ny tokotanin'ny fitsarana rehefa nasain'Andriamanitra niverina tany amin'i Hezekia izy ary nilaza taminy fa dimy ambin'ny folo taona no nampiana tamin'ny androny.
Ny soratra masina dia milaza ao amin'ny bokin'i Fitomaniana 3:37 Iza no miteny, ary tonga izany, nefa Jehovah tsy nandidy azy? Tsy misy olona afaka mibaiko na inona na inona ho tonga amin'ny tena izy raha tsy Andriamanitra no efa nandidy azy. Ka na inona na inona notenenin'ny olona taminao dia tsy mitana lanja be. Manana fidirana amin'Andriamanitra tsy azo lavina ianao amin'ny alalàn'i Kristy Jesosy. Miantso an'Andriamanitra mankany am-bavaka hatrany ianao ary manova izay faminaniana voalaza momba anao.
Jesosy Tompo ô, misaotra anao aho noho ny fahasoavana sy ny tombontsoa nomenao ahy hahita andro hafa tahaka izao, asandrato amin'ny anaran'i Jesosy ny anaranao. Ny famindram-ponao no tsy mbola laniko, mivavaka aho mba ho eo amiko mandrakariva amin'ny famindram-ponao ny anaran'i Jesosy.
Ry Jesosy Tompo ô, hoy ny soratra masina Iza no miteny ary tonga izany, Fa ny Tompo tsy nandidy azy? Tompo ô, tsy mijanona afa-tsy ny fampanantenanao mandritra ny fiainako aho. Mangina aho amin'ny teny ratsy rehetra sy ny teny rehetra voalaza momba ny fiainako tamin'ny anaran'i Jesosy.
Noravako ny fanjakan'ny faminaniana ratsy rehetra tamin'ny fiainako. Ny rindrin'ny fanambarana demonia rehetra manandrana hiasa manohitra ny anjarako dia mananatra anao amin'ny afon'ny fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy aho. Ny faminaniana ratsy rehetra amin'ny fiainako dia nangina tamin'ny anaran'i Jesosy.
Mametraka fanekena vaovao amin'ny alàlan'ny ran'i Kristy aho. Noho ny herin'ny ra izay nalatsaka teo amin'ny hazo fijalian'i Kalvary, dia niditra tamina fanekempihavanana vaovao amin'ny fiainana amin'ny anaran'i Jesosy aho. Mandringana ny endrika fanekena taloha amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Tompoko, ny faminaniana ratsy rehetra momba ny fahafatesana momba ny fianakavianay sy ny ankohonako dia nofoanako amin'ny ran'ny zanak'ondry. Fa voasoratra fa tsy ho faty aho, fa velona kosa hanambara ny asan'ny Tompo amin'ny tanin'ny velona. Hofoanako ny famoahana ny fahafatesana rehetra amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, ny faminaniana ratsy rehetra momba ny tsy fahombiazako tamin'ny fiainako, dia tapaka ianao anio amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soratra masina dia milaza fa Kristy dia tahaka antsika. Ny faminaniana ratsy rehetra momba ny tsy fahombiazan'ny fiainako, henoy ny tenin'ny tompo, ny soratra masina milaza fa ho famantarana sy fahagagana aho, lehibe loatra amin'ny tsy fahombiazana aho, ry fanahin'ny tsy fahombiazana, naringana ahy ny amin'ny anaran'i Jesosy. .
Jesosy Tompo ô, ny faminaniana rehetra momba ny aretina amin'ny fiainako sy ny fianakaviako dia foanako anio amin'ny anaran'i Jesosy. Fa voasoratra hoe: Kristy nitondra ny rofintsika rehetra (...) ary nahasitrana ny aretintsika rehetra (Izy). Ny karazan'aretina na aretina rehetra amin'ny fiainana dia tapaka amin'ny herin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, manapa-kevitra aho fa mandritra ny androm-piainanao, ny torohevitrao dia hijoro amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy. Mananatra mafy izay faminaniana voalaza momba ahy aho. Hofoanako amin'ny hery amin'ny anaran'i Jesosy ny teny ratsy rehetra sy ny fanozonana demonia amin'ny fiainako. Fa voasoratra hoe: Voaozona ho antsika Kristy, satria voaozona izay mihantona amin'ny hazo. Manafoana ny fisehoan'ny ozona amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Tompoko, ianao no mpanakalo be. Mandidy aho fa amin'ny herinao dia hanovanao ny faminaniana ratsy rehetra ho fitahiana sy fampisondrotana ho ahy amin'ny anaran'i Jesosy.
Previous lahatsoratraTeboka vavaka mba hametrahana ny nofinao nofinofy
Prince jean 2 Jolay 2021 Amin'ny 2:22 maraina
Sallom bien-aimé dans le seigneur. J apprécié énormément votre travail. Car, il nous aide beaucoup sur le plan spirituel. Que le seigneur vos soutiens, vous inspire, vous fortifie et vous protège pour la gloire de son nom au nom de jesus Christ!
Fandresena ireo lehiben'ny vavaky ny tanjonao
Salamo 51 Famantarana vavaka ho fanadiovana sy famelan-keloka
70 Fiaraha-mivavaka amin'ny mariky ny vavaka matanjaka